ခြောက်ခြားဖွယ်ရာအသံ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
March 26, 2008, 4:24 am Filed under: Essays And Stories, Lin Let Kyal Sin I’m tired of being what you want me to be ~~~ feeling so faithless ~~~ lost under the surface ~~~ I don’t know what you’re expecting of me ~~~ put under the pressure ~~ of walking in your shoes ~~ [caught in the undertow, just caught in the undertow] ~~~ every step that I take is another mistake to you ~~~ [caught in the undertow, just caught in the undertow] ~~
၁)သီချင်းက ကျွန်မအကြိုက်သီချင်းဖြစ်သလို ခံစားချက်နှင့်တူညီသောသီချင်းကို ဖုန်းသံအဖြစ်လုပ်ထားရင်း ထိုအသံကြားတိုင်း စိတ်ကမှုန်မှိုင်းသွားသည်။ မြည်နေသောဖုန်းကိုကြည့်ရင်း လက်ရှိအခြေအနေက ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာမို့ ဖုန်းကိုင်၍လုံးဝမဖြစ် .. ။ အပြင်ဘက်ကိုအမြန်ထွက်ပြီး ဖုန်းကိုင်လိုက်မှ
သက်ပြင်းမောမောသာချလိုက်ပြီး အတန်းထဲမှသူငယ်ချင်းများကိုသာ ဆောရီးပြောပြီး ကြည့်လက်စရုပ်ရှင်ကို ကျောခိုင်းကာ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှ ကျွန်မ လေးကန်စွာထွက်လာခဲ့ရသည်။ ၂)သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မွေးနေ့မို့ လက်ဆောင်လေးအမြန်ပေးပြီး မျက်နှာပြလေးသွားဖို့အတွက် ခပ်သွက်သွက်လေး ကျွန်မ ထွက်လာခဲ့သည် .. ။ အိမ်မှထွက်လာတာ ၁၅မိနစ်ခန့်ရှိနေပြီ .. ။ အရေးထဲ ဘတ်စ်ကားက လုံးဝမလာသေး။ စိတ်မရှည်မှုများစွာဖြင့် နောက်ဆုံးတော့ ဘတ်စ်ကားဂိတ် ၄မှတ်တိုင်ခန့်ဝေးသော ရထားဆီသို့ ခပ်မြန်မြန်လေးလမ်းလျှောက်လာလိုက်သည် .. ။ ရထားပေါ်သို့ရောက်ပြီး ရထားအမြန်စထွက်မှပဲ စိတ်ထဲမှာ အနည်းငယ်အေးသွားသည်။ တစ်ဘူတာပြီးတစ်ဘူတာကျော်လွန်သွားကာ လမ်းတစ်ဝက်ခန့်ရောက်ချိန်မှာ သီချင်းသံနှင့်အတူ မြည်လာသောဖုန်းသံကြောင့် ကြည်လင်နေသော စိတ်အားလုံး နောက်ကျိသွားရသည်။
`ဟုတ် .. အခုပဲ ရောက်ပါတော့မယ် .. ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါ့မယ် … အခုကလမ်းမှာပဲရှိသေးလို့ပါ … ´ အစရှိသော ရှင်းပြချက်တစ်ထွေကြီးများနှင့်အတူ ထိုဘ၀ကို မုန်းတီးလာမိသည်။
၃)အပြင်ကိုမလိုအပ်ဘဲ သွားရမှာ ၀ါသနာမပါသော ကျွန်မအတွက် အမြဲလိုလိုရောက်ဖြစ်သော တစ်ခုတည်းသောနေရာမှာ စာကြည့်တိုက်သာဖြစ်သည် .. ။ Jurong Regional Library က ကျွန်မအိမ်နှင့်နီးသလို ကျွန်မစိတ်ကြိုက်စာအုပ်များ ငှားယူရာနေရာလည်း ဖြစ်သည်။ အဲကွန်းဖြင့် အေးစက်ကာ အလွန်အမင်းတိတ်ဆိတ်နေသော စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာခုံများဖြင့် စာဖတ်ရတာကို ကျွန်မ သိပ်နှစ်သက်သည်။ အိမ်တွင်စာဖတ်ရတာ ပိုမိုလွတ်လပ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ ဆူညံမှုများက ကျွန်မစိတ်ကိုနောက်ကျိစေသည် .. ။ စကားပြောသံပင်မကြားရသော တိတ်ဆိတ်နေသော စာကြည့်တိုက်သို့ လာရင်း လိုချင်သောစာအုပ်များကိုယူကာ ခုံမှာဝင်ထိုင်ရင်း စာအုပ်ထဲမှာ စိတ်ဝင်သွားသည်မှာ မည်မျှပင်ကြာသွားသည်မသိ .. ။ Vibration Mode ပြောင်းထားသော ဖုန်းက အိတ်ထဲမှ တတူတူဖြစ်နေမှ သတိထားမိတော့သည်။
ညီမ လေး ရေ စိတ် ချမ်း သာ ပါ စေ–
March 26, 2008 @ 9:04 am Reply	လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ။ လင်းလက်ရေးတဲ့စာတွေလဲ ကြိုက်တယ်။ တွေ့ နေတာ ကြာပါပီ။ စီဘောက်စ်မှာ နုတ်ဆက်ရတာ အလုပ်ရှုပ်သလားလို့
March 26, 2008 @ 10:09 am Reply	မြန်မာစာပေကို မြတ်နိုးသူမို့ လေးစားမိပါတယ်။ အမြဲလိုလိုဝင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုပါ။
Comment by Red Alret
March 26, 2008 @ 10:35 am Reply	ဟုတ်တယ် … ဖုန်းပိတ်ပြီး တစ်ပါတ် လောက် နေကြည့်လိုက် … တော်တော် ငြိမ်းချမ်း တယ် …
March 26, 2008 @ 1:26 pm Reply	မဟာပုရိသ၀ါဒဟာ ကျနော်တို့မြန်မာ အမျိုးသားတွေမှာ အခုထိ ရှိနေတုန်းပါ။ ကိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ နာခံမူကိုစမ်းစစ်ခြင်းဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာလည်း အမျိုးသမီးများကို လောကနီတိမှာ နှိမ့်ချထား တာကို ဝေဖန်ရေးသားထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။သမီးရည်းစားဘဲ ဖြစ်စေ၊ လင်မယားဘဲဖြစ်စေ ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူထက်ပိုပြီးအခွင့်အရေးပိုမယူသင့် ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အေးအတူပူအမျှပေါ့။ ဖြစ်ရပ်မှန်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါစေလို့ဘဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Comment by Kyaw Moe Nyan
March 26, 2008 @ 1:29 pm Reply	called control freak! solutions: get rid of the phone get rid of the freak
tame the freak not to control
tame yourself to be aware of someone else
March 26, 2008 @ 6:26 pm Reply	ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကနဲ့ အမြန်ဆုံးကင်းဝေး နိုင်ပါစေ ညီမရေ🙂
March 26, 2008 @ 8:09 pm Reply	ညီမလေးရေ…ဘဝလက်တွဲဖော်လာချောင်းရင်းနဲ့ မမျှော်လင့်ပဲ ဒီpostလေးဖတ်မိသွားတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဒီထက်ဆိုးတဲ့ ချူပ်ချယ်မှူတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖူးတယ်။ လင်းလက်အရွယ်တုန်းက အိမ်ကလိုက်မပို့ပဲ ဘယ်မှမသွားခဲ့ရဘူး။ သူများတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်တာတွေ့ရင် သိပ်အားကျခဲ့တာ။ ဝတ္ထုမဖတ်ရဘူး၊ အဝတ်အစားကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး၊ ယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်းမထားရဘူး။ အဲဒီတုန်းက တို့မှာblogတခုရှိရင် ပေါက်ကွဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တကယ်တော့ မိဘတိုင်းက သားသမီးတိုင်းကို အကြွင်းမဲ့ချစ်ကြပါတယ်။ ချစ်ပုံခြင်းကွာကြလို့ပါ။ ချစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ပူပင်မှူသောကတွေကြောင့် ချူပ်ချယ်ခြင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ အချိန်အတိုင်းတာ တခုထိပေါ့ညီမရယ်။ နားလည်မှူတွေရလာတဲ့အခါ အရာအားလုံး ပြေလည်သွားမှာပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ဖို့ ကြိုးစားနော်(ပြောတော့လွယ်တယ်နော်)။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ။
March 27, 2008 @ 12:53 am Reply	စိတ်ချမ်းသာပါစေ၊ Phone ရန်မှလဲလွတ်ပါစေ။
Comment by သော ကြာ သူ ရ
March 27, 2008 @ 5:19 am Reply	အားလုံးကျေးဇူးပါ။ ကျွန်မ ဒယ်ဒီနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေအားလုံး တစ်နေ့အဆင်ပြေသွားဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ မကြားချင်တဲ့ဖုန်းသံအချို့အတွက်လည်း တစ်ခါတစ်လေတော့ ဖုန်းပိတ်ပြီး နေလိုက်ကြတာပေါ့🙂
March 28, 2008 @ 12:24 am Reply	I understand this feeling ! when i lived with my family ,my mother called me every 15 mins asking me where I am.😦
Comment by May Phuu
July 20, 2008 @ 6:52 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI